Home News Ciidamadii Baydhabo la geeyay oo Magaalada Qas ka wado iyo dagaal ka...
Ciidamadii Baydhabo la geeyay oo Magaalada Qas ka wado iyo dagaal ka socda+Rooboow oo la!!
sida aan wararka ku huleeyno ciidamadii Booliska ahaa ee dhawaan la geeyay magaalada Baydhabo oo kaashanaya Ciidamo Itoobiyaan ah ayaa xabsiga dhigay Musharax Muqtaar Rooboow cali Abuu-mansuur sida aan idinkugu soo gudbinay wararkeeynii hore.
Ciidamadaani ayaa ujeedka loo geeyay magaalada baydhabo waxaa ay aheed in ay qalqal geliyaan doorashada maamulkaasi islamarkaana qaab awoodeeysan loo adeegsado.
Ilaalada Musharax Muqtaar Rooboow ayaa lagusoo waramayaa in awood loo adeegsaday Ciidamada booliska ah oo guriga kusoo hormaray ayaa ilalada jirdilay ka dibna Ciidamo itoobiyaan ah ayaa soo gaaray.
Xaalada magaalada ayaa aad u kacsan dagaal goos goos ah ayaa hada ka soconaayo,shaqaaqooyinka ka dhaco Magaaladaasi waxaa eedeeda dusha saaraneeysa Villa soomaaliya
Previous articleWar Deg deg ah : Dawladda FS oo Itoobiya u adeegsatay in la qafaasho Mukhtaar Roobow iyo Dagaal socda
Next articleXildhibaano ka digay Xariga Muqtaar Rooboow sheegeyna in Amar Abiy Ahmed lagu afduubtay!!
New Djibouti sea route to reduce shipping time between Turkey, Horn...
Aqriso:-Dhowr qodob oo Gundhig u ah Safarka Qarsoodiga ah ee Farmaajo...